STRAWBERRY "HONEY": SHARAXAAD IYO ASTAAMAHA LAGU KOBCIYO NOOCYADA KALA DUWAN - STRAWBERRIES
Strawberries waa mid aad u caafimaad qaba, dhadhan fiican leh oo caan ah. Sidaa daraadeed, ninkii beerta ka shaqeeyaa waa inuu ku koraa gurigiisa ama beerta beerta.
Si kastaba ha ahaatee, ma fududa in la go'aamiyo doorashada kala duwan.
Tixgeli mid ka mid ah noocyada hore ee berry this, si toos ah ugu raaxaysato dareenka ee bannaanka u.
Strawberry "Honey" - mid ka mid ah noocyada ugu horeeya ee doorashada xulashada American strawberry. Buundada cagaarshow iyo ciriiri, caleemuhuna waxay ku koraan dhererka ilaa 23 sentimitir.
Horeba dhexda dhexe ee Maarso xilliga soo kordhaya wuxuu ka bilaabmaa noocyo kala duwan. Laga bilaabo bartamihii Maajo, miraha u baahan in la soo ururiyo 2-3 maalmood oo laba toddobaad ah u bislaadaan.
Tilmaamaha kala duwanaanshahan waa:
Gaadiidka sare ee miraha, sababtoo ah waxay ku hayaan casiraadkooda ilaa 3 maalmood;
dhadhanka iyo muuqaalka miraha;
difaac wanaagsan ee caleenka iyo cudurada xididka.
Beeray dhul furan waxay u baahan yihiin oo keliya geedo strawberry ah "Honey", oo leh ugu yaraan shan caleemo.
Waa muhiim! Masaafada u dhexaysa dhirta marka la beerto waa inay ahaataa ugu yaraan 25-30 cm.
Kala duwanaantani ma jeclaanayso qoyaanka ciidda oo kordhay, sidaas darteed, meelo hoose, geedo waa in lagu beeraa sariiro leh dherer 10-30 cm.Kulmadu waxay ku fiicnaan doontaa inay jeexjeexdo si loo hubiyo in biyaha ugu fiican ee ka yimaada strawberries.
Miisaanka ugu weyn ee la rabo in la ilaaliyo marka la beerto geedo strawberry "Honey":
aagga aad u socoto si aad u beerato berri, waa in uu ahaadaa mid si caadi ah u degan ama si khiyaano leh;
ciidda noocyo kala duwan ee strawberries waa in wax yar acidic, iyo sidoo kale si fiican-bacrimiya iyo sheyga;
Beeraha la beero waa in la kariyaa si loo taago nidaamka xididka geedo strawberry;
Waxa ugu wanaagsan in lagu beero sariiro sariireed oo ah iniin khardal ah ama toon ah oo la koray, laakiin waa in aanad ku beeri meelaha meelaha ay ku jiraan yaanyada ama baradhada;
si fiican haddii dalaggu uu muhiim u yahay cimilada roobka.
Markaad beerto caleenta, xayawaanka cagaaran, marigolds, nasturtium, toon, basasha, digirta, cagaarka, asteka, clematis, canab, dhirta turkiga, fernsum, delphinium, peony, qajaarka, buckthorn badda waxay yeelan doontaa saamayn wanaagsan.
Ka dib markaad si taxadar leh u beerato strawberries ee dhulka, ku shub oo ku dul rusheeyo lakabka dhadday ama dabooli leh filim gaar ah. Haddii aad ku beerato strawberries beerta xilliga dayrta, waa inaad raacdaa xeerarka isku mid ah, laakiin dooro aag dheeraad ah oo beerto.
Sidee si habboon u daryeeli kartaa fasalka "Honey"
Noockani waa strawberry ayaa ku filan in uu maqnaado iyo ka badan qoyaanka, taas oo macnaheedu yahay in fiiro gaar ah la siiyo in waraabiyo dhirta. Toddobaadka ugu horeeya ka dib markii laga beerto geedo strawberry "Honey" waa in la waraabiyaa maalin kasta, ka dibna geedka ayaa kaliya u baahan doonaa hal waraabinta toddoba cisho.
Marka cimilada kulul, biyaha warshad qiyaastii 4-5 jeer toddobaadkii. 8-10 litir oo biyo ah ayaa ku filan hal mitir laba jibbaaran. Ha ilaawin inaad iska saarto cawska sida loo baahdo.
Ma taqaanaa? Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in midabka berry ay ku xiran tahay inta ay nafaqada ku jirto. Sidaas, iftiin berrito, fiitamiin badan oo ay ka kooban tahay.
Dharka ugu sarreeya waa dhacdo lagama maarmaan u ah helitaanka wax-soo-saarka xasilloon laga soo bilaabo sanad-sannad. Baahida strawberry waxay ku kala duwan tahay xilliga xaalada iyo xaaladda dhirta.
Guga strawberries waxay u baahan yihiin quudin fiican. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad kabixiso ciidda oo aad ka takhalusto caleemaha dhintay. Marka xigta, waa inaad isticmaashaa mid ka mid ah Bacriminta soo socda: faleebo shimbir shimbireed ama mullein oo ah saamiga 1:10; faleebo marin, oo hore u degay 4 maalmood; serum lagu qasi jiray biyo. Haddii uu geedka blooms, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo quudinta foliar on caleen. Si arrintan loo sameeyo, ula daawee xalka potassium nitrate ama ash.
Quudinta xagaaga la qaaday ka dib goosashada. Inta lagu jiro muddadan, bacarimiso digada waxay noqon doontaa bacriminta ugu fiican. Sidaa darteed, waa inaad qaadataa qayb ka mid ah digada iyo 4 qaybood oo biyo ah, oo isku dar oo sii daa saddex maalmood. Xalka, xalka waa in lagu qasi karaa 3-4 qaybood oo biyo ah waxaana loo isticmaalaa dharka ugu sarreeya.
Ujeedada dharka dayrta waa inuu diyaariyo dhirta qaboobaha jiilaalka daran. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Bacriminta macdanta gaarka ah, sida biohumus ama Humate Humate, faleebo shimbir daro.
Ha iloobin mulching strawberry. Tani waxaa sida ugu fiican loo sameeyaa xilliga guga marka ciidda la qoyo oo qorraxda kululeeyo. Nidaamkan wuxuu ilaalin doonaa dhirta laga bilaabo kulaylka iyo qalajinta xididada xagaaga. Waxaad isticmaali kartaa qalabka kala duwan sida mulch, sida jilif, balka, qoryaha qoryaha, caws, caws, iwm.
Waa muhiim! Mulchka la soo xulay ayaa la dhigaa dusha sare ee carrada lagu beeray, kaas oo strawberries la koray.
Cagaarshowgu waxay u nugul yihiin cuduro kala duwan iyo cayayaanka, taas oo macnaheedu yahay inay macquul tahay inay ka hortagaan dhacdooyinkooda waqtigooda.
Cudurada waxaa ka mid ah:
Gray kallana - cudurada ugu caansan ee strawberries "Honey". Si dhirta aan loo qaadin cudurkan, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin ka hortag ah: Beer goos goos ah, meel la iftiimay oo hawo leh oo leh carrada dabacsan iyo qoyan, xakamaynta cawska. Iyadoo horumarinta xooggan ee cudurku aanu samayn karin iyada oo aan la isticmaalin fungicides. Inta lagu jiro xilli sii kordhaya waa lagama maarmaan in la dhajiyo dhirta saddex jeer: markii ugu horeysay ee caleemaha koray, tan labaad - dhamaadka dhoobada, markii saddexaad - ka dib markii la soo qaado miraha.
Cudurka Verticillary waa cudur caadi ah oo cayayaanka ah oo la xiriira xididdada dhiigga. Si looga hortago cudurkan, waxaad u baahan tahay inaad ka saarto caleemaha saameeyeen, iyo sidoo kale laba saacadood ka hor intaan la beeriin qoyaan xididada xalka Fitosporin-M. Waxaa sidoo kale faa'iido leh in lagu buufiyo daroogooyinka "Fundazol" iyo "Bayleton".
Macmacaanka macaanku waa patina cad oo ka muuqda ubaxyo, berry iyo inta kale ee dhirta. Waa lagama maarmaan in la buufiyo "Bautophyt", "Alirin - B", "Topaz" ama "Tilt".
Ma taqaanaa? Strawberries waxaa ku jira sonkor ka yar tan liin, inkastoo xaqiiqda ah in ay tahay mid aad u macaan.
Beer cayayaanka "Honey":
Caarada Strawberry waa cadowga ugu khatarta badan ee strawberries. Haddii geedo lagu iibsado oo keliya, waa in biyaha lagu dhajiyaa heerkul ah 45 ° C ilaa 15 daqiiqadood si ay ugu dhajiso. Guga, waxaad labalaabi kartaa-ku buufin kartaa warshadda leh decoction of dusha yaanyo. Sidoo kale ka shaqeynta faleebo strawberry of løndelion waxay noqon doontaa mid waxtar leh.
Cayayaanka Spider - waxay nuugaan casiir ka soo geedka iyo daboolaya qayb ka mid ah caleen leh caano gacmaha. Si aad uga takhalusto, waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo duurka u soo galaya ee geedka iyo tubaakada. Haddii aad u baahan tahay daroogo awood leh, waxaad isticmaali kartaa "Fitoverm".
Weevil strawberry raspberry - cuno caleemo iyo burooyinkeeda dhirta. Sida qiyaasta ka hortagga, mid ka mid ah waa in la dabciyo raadis iyo, guga, gubi dhammaan harta dhirta. In gaysashada waxaa haboon in lagu buufiyo dhirta leh decoction of gooryaanka ah qadhaadh, iyo ka dib markii qaadashada berry - decoction of hellebore.
Daqiiqadaynta caleemaha iyo caleemaha
Boodhka strawberry "Honey" ayaa u muuqda marka la dhammeeyo fruiting ay. Gooyaa waa in la sameeyaa guga ka hor ubax ee geedka iyo dayrta ka dib goosashada dalagga oo dhan. Marna ma jeexi karo shaararkiisa, waxaa fiican in la isticmaalo maqas joogta ah.
Waa muhiim! Haddii aad rabto in aad isticmaasho dufcada sida geedo, uma baahnid inaad gooyso. Fasax u samee 2-3 soodhada, oo hubi inaad iska saarto shaar kale.
Sida loo diyaariyo strawberries jiilaalka
Xilliga jiilaalka, strawberries waa in ay dhistaan ​​qalab caleen caafimaad leh, ujeedada ay tahay in lagu ilaaliyo kelyaha ka soo dhaxeeya. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay bacriminta geedka wakhtiga dayrta iyo ka hortagga muuqaalka cudurada iyo cayayaanka.
Iskuleeyaha kuleylka wanaagsan waa baraf, kaas oo aan u oggolaanin ciidda inay jabiso. Iyo haddii jiilaalka uu baraf la'aan yahay, waxaa jira baahi loo qabo hoy for strawberries (tusaale ahaan, saqaf caws iyo irbado geed).
Haddii aadan heli karin qalabkaan, waxaad isticmaali kartaa "Agrotex" cufnaanta 60 g / sq. mitir Waxaa lagama maarmaan ah in lagu diiriyo strawberries "Honey" kaliya marka heerkulku hoos u dhaco darajo darajo ah.
Cunto kala duwan oo ah "Honey" waxaa lagu dhaliyey Maraykanka iyadoo la marayo noocyada "Vibrant" iyo "Holliday" waana maanta oo ah dalab weyn. Beergooysku way u bislaadaan goor hore, iyo xilliga jiiska waa muddo dheer, sidaas darteed noocyada noocan ahi waa mid caan ah. Celcelis ahaan, waxay si fiican uga hadlaan strawberries "Honey". Bannaanka u ah sida tayada berry, iyo sifooyinka ugu muhiimsan ee kala duwan.
Ma taqaanaa? Dad badan ayaa xasaasiyad ku leh strawberries, laakiin haddii aad cabto cayayaankaan leh caanaha, waxaad u adkeyn kartaa saamaynta alerjiga.
Waxaa sidoo kale jira faa'iido darro, taas oo ka mid ah dareenka dhirta ee warshad this qiyaasta qoyaanka, luminta strawberry soo jiidasho ah inta lagu jiro kaydinta dheer, iyo u janjeedha cudurada nidaamka xididka.
Kuwa iyagu go'aansaday in ay bilaabaan strawberries "Honey", waxay noqon doontaa mid waxtar leh ma aha oo kaliya in la akhriyo sharaxaad ka duwan noocyada kala duwan, laakiin sidoo kale si ay ula arkaan indhahayga, iyo xataa si fiican u tijaabin, si aan hooska shaki ah, ku beeri on my site.
Noocyada strawberry Honey iyo Zenga Zengan waxaa loo adeegsaday beerista iyadoo la isticmaalayo farsamada Finnishka.